Inona ny dokam-barotra amin'ny programa sy marketing? | Martech Zone
Inona ny atao hoe Advertising & Programmatic?
Zoma, Jona 12, 2015 Alatsinainy Oktobra 12, 2015 Douglas Karr
Mandroso izao ny teknolojia marketing ary mety tsy ho tsapan'ny olona maro akory izany. Ny haino aman-jery nomerika dia natomboka tamin'ny marketing sy ny marketing centric centric. Ohatra iray ny orinasa iray hamorona ny fandaharam-potoanany atiny, varotra, dokam-barotra ary mail. Izy ireo dia mety manitsy sy manatsara azy ireo amin'ny fandefasana sy ny tahan'ny tsindry farany azo tsapain-tanana, saingy bebe kokoa na kely aza ny atiny navoaka tamin'ny fandaharam-potoanan'ny orinasa - fa tsy ny mpitarika na ny mpanjifa.
Ny automatisation marketing dia nanararaotra nampizara ny mpanjifanao ho personas tsy manam-paharoa, mampivelatra atiny manokana ho azy ireo - na dia natao manokana aza, ary natolony azy ireo tamina fandaharam-potoana voafetra izay hamaritana ny fanao manaraka ny fikafika. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny mombamomba azy sy ny androm-piainany dia mbola niankina tamin'ny mpivarotra ihany. Azo antoka fa nifototra tamin'ny fikarohana sy fandalinana marobe… saingy mbola tsy tompon'andraikitra tamin'ny lalan'ny fiovam-pony ny mpanjifa.
Midira lehibe. Ny fahaizana mampihatra ny fianarana milina sy mamakafaka ireo angona amin'ny fotoana tena izy dia mamela ny vahaolana teknolojia ara-barotra hamolavola fomba fanao vinavina amin'ny fahitsiana. Ankehitriny ny mpanjifa dia afaka mivezivezy amin'ny alàlan'ny fiainany manokana manokana izay ahafahan'ny fiovana misimisy ao amin'ny fitondran-tena amin'ny fidirana an-tserasera, ny fidirana an-tserasera, ny finday ary ny fiarahamonina dia afaka mampihetsika azy ireo amin'ny làlan'ny fiovam-po. Fandrosoana mahavariana izay tsy isalasalana fa hanova ny varotra, hampitombo ny famerenam-bola, ary hampihena ny fihenjanana manosika sy manintona izay ampiharintsika amin'ny vinavinantsika sy ny mpanjifantsika.
Inona ny atao hoe Marketing Programmatic
Ny fepetra Haino aman-jery fandaharana (Fantatra koa amin'ny hoe marketing amin'ny programa or dokambarotra fandaharana) dia mandrakotra karazana teknolojia izay mandeha ho azy ny fividianana, ny fametrahana ary ny fanatsarana ny tahiry amin'ny haino aman-jery, izay manolo ny fomba mifototra amin'ny olombelona. Amin'ity dingana ity, ny mpiara-miombon'antoka amin'ny famatsiana sy ny fangatahana dia mampiasa rafitra mandeha ho azy sy fitsipiky ny orinasa hametrahana doka amin'ny lisitr'ireo fampahalalam-baovao kendrena amin'ny elektronika. Nisy nanolo-kevitra fa ny haino aman-jery fandaharana dia tranga mitombo haingana eo amin'ny sehatry ny media sy ny dokambarotra manerantany. Wikipedia.
Ny dokam-barotra dia misy amin'ny sehatra media sosialy rehetra. Ny vahaolana tsirairay dia manana safidy manokana azo adino manokana miankina amin'ny mombamomba, fitondran-tena, toerana jeografika, na fitaovana mihitsy aza. Izany dia manome fotoana iray ho an'ireo mpivarotra hamolavola dokam-barotra izay mihetsika miaraka amin'ny fanantenana mankany amin'ny fiovam-po. Ity dia tolotra sarotra sy fotoana mety kokoa noho ny tsotra remarketing tetika.
Marketing amin'ny programa mamela mpivarotra hametraka mampiasa ny sehatra hanatsarana ny tanjona, ny tolo-bidy ary ny fanatanterahana mba hampitomboana ny fiverenana amin'ny fampiasam-bola. Ny isan'ny fitarika dia azo hatsaraina raha toa kosa ny vidiny isaky ny mitarika dia afaka manatsara hatrany hatrany ny fandaniana farany ambany. Yieldr dia sehatra iray tahaka izany.
Efa elaela ny rafi-bidin'ny fitantanana notanterahina, saingy matetika izy ireo tsy nahatoky sy tsy azo atokisana. Amin'ny fotoana ahitanao izay tsy nety tamin'ny fipetranao dia mety efa notsofinao ny teti-bolanao. Ny fandrosoana amin'ny teknolojia angona ary koa ny angon-drakitra loharano loharano dia ahafahana manangana sehatra vaovao ho an'ny varotra fandaharana izay mampihena ny loza ateraky ny dokambarotra fandaharana mifandray amin'ny rafitra omaly. Ny sehatra fanaovana dokambarotra amin'ny haino aman-jery sosialy dia mazàna manome vahana ny marketing amin'ny programa noho ny fahalalahany sy ny habetsaky ny angon-drakitra misy.
Yieldr ny vaovao farany manasongadina ny tambajotram-pifandraisana sosialy lehibe dimy sy ny tombony azo amin'ny fampifangaroana azy ireo amin'ny sehatra fandaharana.
Tags: fanolorana mandeha ho azylehibeDatadokambarotra fandaharanamarketing amin'ny programahaino aman-jery fandaharanampividy doka media sosialymividy doka amin'ny media sosialydoka amin'ny media sosialyfampahalalam-baovao sosialytahiry media sosialyyieldr
Manomboha amin'ny fitsapana A / B miaraka amin'ireo singa 7 ireo
1 Mey 2016 tamin'ny 5:04 hariva
avy aiza ny Big Data avy izay hitarika dokam-barotra fandaharana?
1 Mey 2016 tamin'ny 8:01 hariva
Peter, izany dia fitambarana angona momba ny fitondran-tena eo amin'ny pejy nalain'ireo sehatra antoko fahatelo, angona demografika sy firmagraphic ivelan'ny toerana, filaharana ara-tsosialy, tantaram-pikarohana, tantara momba ny fividianana ary loharano hafa rehetra. Ny sehatra fandaharana lehibe indrindra izao dia mifamatotra ary afaka mamantatra ireo mpampiasa azy amin'ny cross-site ary na ny cross-device aza!